लामो समयपछि बरिष्ठ लोक सर्जक दुर्गा रायमाझीको नयाँ सृजना “फर्क दाई फर्क” ! (भिडियो) - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper
लामो समयपछि बरिष्ठ लोक सर्जक दुर्गा रायमाझीको नयाँ सृजना “फर्क दाई फर्क” ! (भिडियो)
काठमाडौँ । बरिष्ठ लोक सर्जक दुर्गा रायमाझीको नयाँ सृजना “फर्क दाई फर्क” सार्वजनिक भएको छ । रायमाझीको आफ्नै शब्द, लय र स्वरमा तयार पारिएको गितमा विदेश रहेका नेपालीलाई स्वदेशमै फर्कन आह्वान गरिएको छ । उहाँले गित मार्फत् विदेशमा रहेकाहरु फर्किएर स्वदेशमै केही गर्ने हो भने नेपाल नै जापान, अमेरिका, हङ्कङजस्तो बन्ने तर्फ प्रवासीहरुको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।